बालबालिकामा थाइराइड - स्वास्थ्य - प्रकाशितः श्रावण ४, २०७४ - नारी
बानेश्वरकी ११ वर्षीया निस्मा (नाम परिवर्तन) आमाका साथमा आफ्नो शारीरिक विकास नभएको गुनासो गर्दै वयोधा हस्पिटलमा डा. मनीषा मिश्रलाई भेट्न पुगिन् । उपचारको सिलसिलामा उनलाई थाइराइड भएको थाहा भयो । यसले गर्दा नै उनको शारीरिक विकास उचित ढंगमा नभएको रहेछ । निस्माको जस्तो समस्या अहिले धेरै बालबालिकामा देखा पर्न थालेको छ । ठूला मानिसको तुलनामा बालबालिकामा देखिने थाइराइड फरक हुन्छ । बालबालिकामा जन्मजात देखिने थाइराइडलाई कन्जेनाइटल हाइपोथाइराडिज्म भनिन्छ ।
- डा. मनीषा मिश्र, कन्सल्टेन्ट इन्डोक्राइनोलोजिस्ट, वयोधा हस्पिटल
थाइराइड ग्रन्थि बन्ने बेलामा कुनै जटिल समस्या भएर यसको उत्पादनमा गड्बढी हुन्छ । त्यसले उत्पादन गर्ने हार्मोनको मात्रा धेरै न्यून तथा उत्पादन नै नहुँदा यो समस्या जन्मजात रूपमा देखिन्छ । गर्भवती महिलाले थाइराइडको औषधि सेवन गरिरहेको भए शिशुलाई पनि थाइराइड हुने सम्भावना हुन्छ । वंशानुगत कारणले पनि थाइराइड हुनसक्छ । यसैगरी आयोडिनको कमीका कारण पनि बालबालिकामा थाइराइडको समस्या देखापर्छ । घाँटीमा हुने थाइराइड ग्रन्थिबाट टी ३, टी ४ हार्मोनको उत्पादन हुन्छ । त्यसको कमी भएमा हाइपो थाइराडिजम देखिन्छ भने बढी उत्पादन भएमा हाइपरथाइराडिजम देखिन्छ । हाइपोथालामस र पिट्युटरी ग्रन्थिबाट थाइराइडमा जाने सन्देशात्मक हार्मोनमा गढबढी आउनाले पछि थाइराइडको समस्या देखापर्छ । थाइराइड हर्मोन लगायत अरु हर्मोनको पनि समस्या देखिन थाल्छ । जस्तो ग्रोथ हर्मोन, सेक्स हर्मोन ।
सामान्यत: थाइराइड दुई किसिमका हुन्छन्– हाइपरथाइराडिज्म र हाइपोथाइराडिज्म । थाइराइड हार्मोन बढी उत्पादन हुने अवस्थालाई हाइपरथाइराडिज्म भनिन्छ भने कमी हुने अवस्थालाई हाइपो थाइराडिज्म भनिन्छ । धेरैजसोलाई हाइपोथाइराडिज्म भएको पाइन्छ ।
–प्राय: अभिभावकले बालबालिकाको विकासक्रम ख्याल गर्दैनन् । उचाइ नबढेपछि मात्र अस्पताल आउँछन् ।